Nagu saabsan - Quanzhou Stamgon Trading Co., Ltd.
Quanzhou Stamgon Trading Co Ltd. wuxuu ganacsi ka sameynayay dharka dharka ilaa19993. Badeecadaheena waxaa ka mid ah gaagaarka xeebta, dharka dabbaasha iyo dharka Yoga iwm. Suuqyadeena ugu waaweyni waxay ku yaalliin Yurub, Waqooyiga Ameerika, South pacific iyo Koonfur Bari Aasiya. Waxaan leenahay todobo warshado oo iskaashatooyin ah oo ay leeyihiin in kabadan 2300 shaqaale xirfad leh. Wax soo saarkayagu waa ilaa labaatan milyan oo doolarka Mareykanka sanadkii.
Waxaan wadashaqayn dhow oo dhow la leennahay macaamiisha sida Zara, K-market, iwm. Waxaan si daacad ah ugu soo dhaweynaynaa saaxiibbada adduunka oo dhan inay soo booqdaan warshadeena oo ay nagala hadlaan arrimaha ganacsiga. "Marka laga hadlayo macmiil kasta sida ugu muhiimsan, bixinta adeegga ugu wanaagsan ee macaamiisha" ayaa ah qormadeenna. Waxaan had iyo jeer heli doonnaa iskaashi muddo dheer waxaanan rajeynaynaa inaan noqonno kuwa ugu wanaagsan ee aan adiga kula wadaagi doono.
Bandhigga Melbourne (07 / 11-09 / 11)
Bandhigga ISPO (2 / 86-01 / 07)
Macaamiil Naga soo booqo
Booqashada Macaamiisha ee USA